Barack Obama oo weerar afka ku qaaday madaxweyne Trump – AwKutub News
Barack Obama oo weerar afka ku qaaday madaxweyne Trump
By awkutubnews November 3, 2018 November 4, 2018
Leave a Comment on Barack Obama oo weerar afka ku qaaday madaxweyne Trump
Madaxweynihii horre ee waddanka Mareykanka Brack Obama ayaa weerar afka ku qaaday madaxweyne Donald Trump, isagoo ku eedeeyay in uu abuurayo nacayb loo qaado dadka soo galootiga ah.
Obama oo ka hadlayey fagaare uu xisbigiisa ku qabsaday Florida, ayuu ku tilmaamay wax lagu qoslo hadallada xisbiga Jamhuuriga ee ah in dadka soo galootiga ee ka soo lugeenaya Laatin Amerika ay khatar ku yihiin waddanka Mareykanka.
Obama oo taageerayey musharrixiinta xisbiga dimuquradiga ayaa dadka ugu baaqay inay u codeeyaan si ay soo celiyaan barnaamijkii daryeelka caafimaadka ee guulaha waaweyn ka soo hoyiyay xilligiisii.
Mr. Obama ayaa ka digay hadallada madaxweyne Trump kuwaasoo uu sheegay in ay u badan yihiin kuwa xanaf leh oo dadka lagu kicinayo.
Obama ayaa qorshe qiyaamo ku tilmaamay qorshaha Trump uu wato ee ah in ciidamo badan la geeyo xadka dalkiisa uu la lee yahay xadka Mexico, halkaasoo la sheegayo in ay soo gaareen dad badan oo soo galooti ah.
Ololaha doorashada dhexe ayaa ka socota waddanka Maraykanka, taasoo la qaban doono maalinta Talaadada ee soo socota.
Trump ayaa sheegay in jamhuuriga uu doonayo in dalka laga mamnuuco kooxaha falal dambiyeedyada ka geesta waddanka Maraykanka.
Tags: Caalamka Doorasho Maraykanka Obama Trump Wararka
Previous Entry Maamulka Trump oo cunaqabatayn dib ugu soo rogaya Iran
Next Entry Soomaaliya oo sanadkii 4-aad kasoo muuqatay safka hore ee dalalka ugu khatarta badan dunida